Chivabvu 14, 2021
Dare redzimhosva repamusoro raramba kutambira chikumbiro cheJudicial Services Commission, JSC, pamwe nechegurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, chekuti vatongi vari kufanirwa kunzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwemakore emutongi mukuru wematare edzimhosva kuitira kuti arambe achishanda kudarika panguva yaanofanirwa kuenda pamudyandigere.
Vatongi ava, Justice Happias Zhou, Justice Edith Mushore naJustice Jesta Charehwa, vati havana divi ravakarerekera nokudaro zvikumbiro izvi hazvina musoro.
Dare iri raswera richinzwa kubva kumagweta eJSC neaVaZiyambi ayo aipikisa kuti vatongi vedare iri vakadomwa ava kuti vanzwe nyaya iyi achiti vatatu ava havafanirwe kuti vanzwe nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwemakore pabasa kwaVaLuke Malaba nokuti vane godo panyaya iyi.
Muchikumbiro chavo kudare, VaZiyambi Ziyambi vati nyaya yekuti Constitutional Amendment Number 2 Act haibati vatongi vedare reHigh Court, inoita kuti vanyunyute nemutemo uyu nekudaro havakwanisi kunzwa nyaya iyi vasina kwavakarerekera.
Vati vatatu vese ava vanofanirwa kubviswa kuti vasanzwe nyaya iyi.
Vatiwo havasi kufara nekuti havana kupihwa nguva yakareba yekuti vazeye nyaya iyi vasati vaipikisa.
Asi JSC yati haina basa nekuti vamwe vatongi vanzwe nyaya iyi ichiti yaida kuti Justice Zhou chete vabviswe pavatongi vachanzwa nyaya iyi.
Asi vachipikisa VaZiyambi neJSC, gweta raZimbabwe Human Rights NGO Forum, Advocate Tabani Mpofu, vati nyaya yaVaZiyambi haina maturo uye ine chinangwa chekusvibisa chimiro chevatongi vedare reHigh Court.
Advocate Mpofu vatiwo hapana humbowo hwekuti Justice Zhou vakadomwa kuti vatore chinzvimbo kuConcourt.
Vatiwo hapana chikonzero cheJSC kuti ive munyaya iyi vachiti zvayakaita zvinosiya vatongi vematare vasina kwekuenda kana vaita zvichemo.
Vati basa reJSC nderekuchetengetedza vatongi uye nekupindira kwayakaita panyaya iyi, munongedzo mukuru wekushungurudza vatongi vematare.
Nyaya yeZimbabwe Human Rights NGO Forum yabatanidzwa neyemagweta echidiki, Young Lawyers Association of Zimbabwe uye magweta emasangano maviri aya ari kutsigirana kupisa VaZiyambi neJSC.
Masangano aya anoti vatongi vese veConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa makore pabasa uye vanofanira kuenda pamudyandigere kana vachinge vave nemakore makumi manomwe.
Asi zvichitevera kushandurwa kwebumbiro remitemo yenyika, mutungamiriri wenyika anokwanisa kuwedzera nguva yavo pabasa kana vaine hutano kwakanaka.
VaMnangagwa vakatowedzera nemakore mashanu nguva yaJustice Malaba vari pabasa vachishandisa mutemo mutsva uyu kunyange hazvo vanga vachifanirwa kuenda pamudyandigere kutanga musi wa 15 Chivabvu, 2021.
Nyaya iyi ichiri kuenderera mberi mudare redzimhosva.